SAWIRRO:-Madaxweyne Lafta-gareen oo soo gaaray Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRRO:-Madaxweyne Lafta-gareen oo soo gaaray Magaalada Muqdisho
Ardaan Yare 21 March 2021
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay wadanka Turkiga ayaa goordhaw kasoo degay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho.
Lafta Gareen ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan Golayaasha Dowladda Soomaaliya, qaar ka mid ah Odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan Magaalada Muqdisho iyo xubno kale.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Muqdisho u yimid ka qeyb galka shir looga hadlayo arimaha doorashada iyo khilaafka ka taagan kaa uu iclaamiyay Madaxweynaha dowladda Farmaajo.
Madaxda maamul Goboleedyada ayaa dhamaantooda hada ku sugan Magaalada Muqdisho oo la filayo in uu ka dhaco shirka looga hadlayo arimaha doorashada , lamana oga shirka Farmaajo iclaamiyay in beri uu dhici doono iyo in kale.
Dowladda Somalia oo War kasoo saartay weerar Cirka ah oo ka dhacay…
XOG:-Madaxweyne Saciid Deni oo aqbalay dalab uga yimid Wakiilka QM